DAAWO+FALANQEYN: Madaxweyne Farmaajo & Dawlad gobaleedyada Yaa run sheegaya, Xaggeese dalku u socdaa? – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha Jamhuuriyada Faderaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay xalay ka hadlay arrimaha ku saabsan shirkii fashilmay ee magaalada Garoowe, kusoo dhamaaday, wuxuna sheegay in guuldaradda shirkaas ay ka dambeeyeen dawlad gobaleedyadu.
Farmaajo ayaa cambaareyn culus huwiyey maamul gobaleedyada, wuxuuna daaha ka rogay in ay doonayaan in loo ogolaado awoodo aysan sharciyad u laheyn, gaar ahaana madal gaar ah oo kulmisa oo uu sheegay in ay horey u soo arkeen dhibtooda.
Madaxweynayaasha Puntland & Jubbaland si rasmi ah ayay u sheegen in Madaxweyne Farmaajo marar badan doonayay in golahan la dhiso, laakiin taladdu ay meel kale ka go’oday oo ay ahayd mid ay dhinac Madaxda dawladdu go’aanka u qaadan waayeen.
Madaxweyne Farmaajo oo u muuqday mid soo celinaya kalsoonida Shacabka ay ku qabaan dawladiisa ayaa tibaaxay in aysan cidnaba ka yeeli doonin wax uusan ogoleyn sharcigu, dhammaan dawlad gobaleedyadana ay doorashada gali doonaan cidii waqtigeedu dhamaado.
Reer Puntland weli cashar kama baran Daba-oradka reer koonfur iyo federalka waana waxa dib u dhigay, waa in arimahooda inay xalistaan awooda saaraan khaasatan nabadgelyada, dhaqaalaha iyo midnimada.